Iyo yakapfava fomula yekushandisa napurofesa kana mudzidzisi
Yakatumirwa ne Tranquillus | Dec 9, 2021 | Kunyora uye kunyora unyanzvi hwokukurukura
Kunyorera mudzidzisi: ndeupi mutsara une hunhu wekutora?
Mazuva ano, kubata mudzidzisi kana purofesa kuburikidza neemail ndiyo nzira iri nyore. Nekudaro, kunyangwe kupusa uku kuri kwakakosha, isu dzimwe nguva tinosangana nematambudziko kana zvasvika pakunyora iyi email. Imwe yacho pasina mubvunzo mutsara wekuremekedza kutora. Kana sevamwe vazhinji, iwe unosanganawo nedambudziko iri, chinyorwa ichi ndechako.
Chiyeuchidzo chipfupi pakutaura nemudzidzisi
Pakutumira email kuna purofesa kana mudzidzisi, zvakakosha kuti zvizivikanwe nyore kuburikidza ne e. Zvechokwadi zvinokurudzirwa kuti uise zita rako rekupedzisira zvakananga mubhokisi retsamba remunyori wako, munyaya iyi purofesa kana mudzidzisi.
Mukuwedzera, nyaya ye-e-mail inofanira kutsanangurwa zvakajeka, kudzivirira mutori wako kubva pakupambadza nguva achiitsvaga.
Hunhu hupi kumudzidzisi kana purofesa?
Kazhinji muchiFrench, tinoshandisa hunhu "Madame" kana "Monsieur" pasina zita rekupedzisira. Nekudaro, zvinoenderana nehukama kana mamiriro ehukama hwako nemunyori wako.
Kana iwe uine kudyidzana kwakakura kwazvo neanogamuchira email, unogona kusarudza mutsara wekuremekedza "Dear Sir" kana "Dear Madam".
Pamusoro pezvo, iwe zvakare une mukana wekutevera hunhu hwezita. Zvichienderana nekuti munyori wako ari purofesa, mutungamiriri kana rector, zvinokwanisika kuti "Mr. Purofesa", "Mr. Director" kana "VaRector".
VERENGA Nzira yekunyora sei zvinobudirira kubasa?
Kana ari mukadzi, anobvumirwa kushandisa "Madam Professor", "Madam Director" kana "Madam Rector".
Zvisineyi, zivai kuti hazvibvumidzwe kuti VaM. kana Mai, muchienderera mberi nechidimbu, kureva nekushandisa VaM. kana Mai. Kukanganisa kusaita kunyora kuti "Va. ". Vanhu vanofunga zvisiri izvo kuti vakatarisana nechidimbu che "Bambo". Asi, ipfupiso yekwakabva Chirungu.
Ruremekedzo rwekupedzisira kune email nyanzvi inotumirwa kumudzidzisi
Kune maemail ebhizinesi, mutsara wekupedzisira une hunhu unogona kuve chirevo chakadai sekuti "Nekuremekedza" kana "Nekuremekedza". Unogonawo kushandisa matauriro ekuti "Best respects" kana kuti "Best respects". Zvinogonekawo kushandisa iyi fomula ine hunhu iyo munhu anosangana nayo mumabhii ehunyanzvi: "Ndapota gamuchirai, Muzvinafundo, mazvita angu".
Kune rumwe rutivi, kumudzidzisi kana purofesa, zvingava zvakaoma zvikuru kushandisa mutsara wekuremekedza "Kuperera" kana kuti "Kuperera". Panyaya yekusaina, ziva kuti tinoshandisa zita rekutanga richiteverwa nerekupedzisira.
Pamusoro pezvo, kupa imwe kiredhiti kune yako email, iwe unozowana yakawanda nekuremekedza syntax uye girama. Kunyemwerera uye zvipfupiso zvinofanirwa kudzivirirwa. Mushure mekutumira email, kana iwe usati uine mhinduro mushure mevhiki, unogona kutevera nemudzidzisi.
Iyo yakapfava fomula yekushandisa napurofesa kana mudzidzisi January 7th, 2022Tranquillus
pashureA 15% muhoro wekuwedzera kune vabatsiri vekumba muchikamu chekuzvidira
zvinoteveraKuisa mumitsara ine hunhu: Une chokwadi chekuti uri kuishandisa zvakanaka?
Zviri nani kutumira maemail kana kuti tsamba?